कथा : पुतली | Jwala Sandesh
कथा : पुतली
| प्रकाशित मितिः शनिबार, अशोज १७, २०७७ ::: 708 पटक पढिएको |
म छुट्टिएँ । मैले सत्र बर्ष, एघार महिना र पच्चिस दिन लामो मेरो वैवाहिक सम्बन्धको कानुनीरुपले अन्त्य गरेँ । आत्मिक, शारीरिक, सामाजिक, व्यवहारिक, आर्थिक सबै हिसाबले म ऊबाट अलग भएँ । हाम्रो सम्बन्धबिच्छेद भयो । सम्बन्धबिच्छेदसँगसँगै अब म ‘हामी’ बाट ‘म’ अर्थात अनामिका भएँ ।
दोस्रो विकल्प नभेटेपछि मैले बिस्तारै हिजोको लेखाजोखा गर्न छोडेँ र ‘हामी’ बाट ‘म’ मा फर्किनुलाई नै आजसम्मको समग्र उपलब्धी मानेँ । अब मैले त्यही मानार्थ उपलब्धीलाई आधार बनाएर मेरो जीवनको एक नयाँ अध्याय शुरुवात गर्नु थियो । त्यसैले एकमहिना एघार दिन बिरामी बिदा लिएर बसेको जागिरमा ढिलो नगरी फर्किने योजना मनमा बनाएँ । म अफिस जाने भएँ ।
मान्छेकोभन्दा कोठाका निर्जीब बस्तुहरुको त्यो मूक स्वागत साँच्चै न्यानो लाग्यो मलाई । मैले त्यो न्यानोपनलाई महशुस गरिनसक्दै सजीव बर्चस्व भएका केसीजी मेरो कोठामा टुप्लुक्क आइपुगेँ ।
“अहो ! के हो ? तपाईंको त लोग्नेसँग छुटानाम भयो रे नि…? के हो चक्कर !” केसीजी यति उत्साहित थिए कि मानांै उनी मेरो यही क्षणको प्रतिक्षामा थिए ।
“हो । मेरो लोग्नेसँग छुटानाम भयो ।” मैले भने ।
“ल…ल…तपाईंकै छन् दिन अब !”
केसीजीले मेरा दिनहरु खै कसरी देखे कुन्नि ? मौखिक पात्रो बनाएर प्रस्तुत गर्दै मेरो कोठाबाट निस्किए ।
मैले केसीका शब्दहरुलाई मेरो मनको गहिराई नाप्नै दिइनँ । मेरालागि केसीजीको उपस्थिति बुटजुत्ता लगाएर जंगलमा शिकार गर्न हिँडेको शिकारी बराबर थियो । शिकारीको प्रवृति नै कुल्चिने, ताक्ने, चिथोर्ने, लुछ्ने अनि मार्ने ! यस्तो प्रवत्ति भएको शिकारीले कति पुतलीका डिम्बा भएका रुखबिरुवाका पात, हाँगा लुछ्दै र किल्चदै हिँडे होलान् ? तर, पुतली पलायन भएको छ र ?
म पुतली ! केसीजी शिकारी !! मैले चित्त बुझाएँ ।
धेरैदिनको अन्तरालपछि मेरो काम शुरु भएकाले मेरो कोठामा सेवाग्राहीहरुको चाप थिएन । दुईचार जनालाई सेवा दिएपछि खाजा खाने समय भयो । क्यान्टिनमा झरेँ । केसीजी र रविराज मभन्दा पहिले पुगिसकेका रहेछन् ।
म तिनको छेउको टेबलमा बस्नु नपरोस् भन्ने चाहन्थें । यसो हेर्दा क्यान्टिनको काउन्टरको कुनामा दुईटा मात्र कुर्सी भएको टेबलमा सुवर्णा मेडमलाई खाजा खाँदै गरेको देखेँ । त्योभन्दा उचित ठाउँ र व्यक्ति अरु नहुने देखेर मैले छिटोछिटो त्यतैतिर पाइला बढाएँ ।
“लौ ! अनामिका, हैन कता हराएकीथ्यौ भन्या ? ल बस बस । ” मेडमले खाली कुर्सीतिर देखाउँदै उही ‘भन्या’ को थेगो जोडेर बोलिन् ।
“कहाँ हराउनु र ! त्यस्तै-उस्तैमा ब्यस्त भएर…!” मैले पनि कुर्सी तानेर बस्दै भनेँ ।
“हेर…! तिम्रो त घरबारै पो टुटेछ ।” मुखमा हालेको खाजाको बुजो चपाउँदै उनले भनिन् -“मलाई त रविराजले पो कसैलाई नभन्नु है मेडम भनेर खुसुक्क सुनाएको ।”
“हो त मेडम ।” मैले यत्ति भनेँ ।
“सानोतिनो ठाकठुक त हामी आईमाईलाई नै सहनु भन्छन् ।” चम्चाले खाजाको प्लेट कोतर्दै मेडमले थपिन् -“जे भए नि तरुनी-बरुनी नै छौ, एउटा न एउटाले लगिहाल्छ , पीर नगर ।”
सुवणर्ा मेडमको निर्णयात्मक प्रतिकृया सुन्दा मेरो शरिरभरि काँडा उमि्रए । उनले कसरी सानोतिनो ठाकठुकमै सम्बन्धविच्छेद भएको निष्कर्ष निकालिन् ? कसरी उनले मलाई एउटा न एउटासँग गैहाल्छु भन्ने सोचिन् ?
यस्तो सोच उनको दिमागमा आइरहँदा उनले त मलाई एक आमासम्म देखिनन् , एक राष्ट्रसेवी कर्मचारी पनि देखिनन् । न त एक सचेत नागरिक, न एक शिक्षित व्यक्ति नै देखिन् । देखिन् त केवल एउटा न एउटाले लगिहाल्ने तरुनी-बरुनी ! ‘लानु’ र ‘जानु’लाई जीवन देख्ने सुवर्णा मेडमको सोचप्रति दया लाग्यो मलाई ।
खान्दानी परिवारकी बुहारी भएर महलजस्तो घरभित्रबाट जीवनको शुरुवात गरेकी सुवर्णा मेडमले महल मात्र बुझेकी छन् । उनका फूलबारी र बगैँचा त मालीले स्याहार्छन् रे । फूलबारी नदेख्नेलाई पुतलीको संसार बुझिराख्नुपर्ने के जरुरी र ?
म पुतली ! सुवर्णा मेडम खान्दानी बुहारी !! मैले चित्त बुझाएँ । तर, मलाई सुवर्णा मेडमका साथ धेरैबेर बस्नु उचित लागेन । त्यसैले कफी पिई नसक्दै पैसा तिर्न काउन्टरतिर लागेँ ।
“मेडमको कफीको पैसा रविराज सरले तिरिसक्नुभएको छ ।” काउन्टरमा बसेको केशरीलालले मुसुक्क मुस्काउँदै भन्यो ।
केशरीलालको कुरा सुनेर भर्खरै पिएको तातो कफी नै शरिरभरि खन्याएको अनुभुति भो मलाई । तन र मन दुवै भतभत पोल्यो ।
“आइन्दाबाट मेरो खाजाको पैसा मैले थाहा नपाई अरुबाट लिने काम नगर्नु, केशरीलाल ।” मैले रिसाउँदै भनेँ ।
“हस् मेडम ।” केशरीलाल बोल्यो र छेउमै उभिएको वेटरसँग मुखामुख गरेर हाँस्न थाल्यो ।
थाहा नपाई कसैको निगाहको कफी आधा पिएकोमा अत्यन्तै ग्लानी भयो मलाई । त्यसमाथि केशरीलाल र वेटरले मुखामुख गरेर हाँसेको पटक्कै चित्त बुझेन । रविराजले मेरो कफीको पैसा तिर्नुलाई एक दुर्घटना सम्भिmँदै म आफ्नो कार्यकक्षमा फर्किएँ ।
संसारको खाद्य उत्पादनलाई परागशेचनबाट टिकाइराख्ने पुतलीको क्षमता एकाउन्टिङ्ग पढेको रविराजले के बुझोस् ।
म पुतली ! खजाञ्ची रविराज !! म चित्त बुझाउँदै खाजा खाने समयलाई छोट्याएर कार्यकक्षमा फर्किएँ ।
‘जीवन रोमन रोडझैं सीधा कहाँ रहेछ त खोई ?’
म एक्लै बडबडाउँदै टेबलमा आइपुगेका फायलहरु पल्टाउन थालेँ । फायलका केही पानाहरु पल्टाउन नपाउँदै करिडोरमा टकटक जुत्ता बजेको सुनियो । मलाई भने पल्टाउँदै गरेको फायल पुरै अध्ययन गरिनसक्दै सेवाग्राही कोठामा नआइदियोस् भन्ने थियो । भने जस्तो कहाँ हुन्थ्यो ? त्यो टकटक गर्ने जुत्ताको आवाज मेरो चाहना विपरीत कोठाभित्र पसिसकेको थियो ।
“पीआर सर ! नमस्कार ।” मैले हडबडाउँदै अभिवादन गरेँ ।
मेरो कोठाभित्र आइपुगेको जुत्ताको आवाज कुनै सेवाग्राहीको नभएर मेरो अफिसको कार्यकारी प्रमुखको थियो । उनको एकाएकको उपस्थिति देखेर अघिसम्मको सग्लो मेरो आत्मबल बिस्तारै चोइटिन लाग्यो ।
“नमस्कार !” पीआर सर मेरो अभिवादन फर्काउँदै टेबल सामुन्ने सेवाग्राही बस्ने कुर्सी तानेर बसे र मलाई पनि आफ्नो कुर्सीमा बस्न आदेश दिए ।
उनको आदेश मान्दै कुर्सीमा बसेँ । हामी आमने-सामने भयौं ।
“तपाईंको पारिवारिक बिखण्डनप्रति दुःख लाग्यो ।” सान्त्वनाबाट कुरो शुरु गरे उनले ।
रविराज, केसीजी र सुवर्णा मेडमकोभन्दा पीआर सरको अभिव्यक्ति सभ्य लाग्यो मलाई । त्यसैले उनीतिर हेर्दै भनेँ -“सरको सहानुभूतिका लागि धन्यबाद ।”
“तपाईंले आफूलाई एक्लो नठान्नू होला । काममा केही असजिलो परे मलाई सिधैं सम्पर्क गर्नु होला । यो मेरो निजी नम्बर हो ।” कोटको भित्री गोजीबाट भिजिटिङ्ग कार्ड निकालेर मेरो हातमा थमाउँदै उनले भने- “आर्थिक समस्या भए पनि भन्न नहिकिचाउनु होला ।”
यति भनेर उनले मेरा दुवै हात बेस्सरी अँठ्याए अनि कोठाबाट बाहिरिए ।
उनको दोहोरो चरित्रलाई देखेर म विस्मित भएँ । आजसम्मको मेरो बुझाइमा हाकिम भनेको शक्तिकेन्दि्रत र आफूभन्दा कमजोरहरुलाई सीमांकृत गर्ने एउटा ओहोदा भन्ने मात्र थियो । आज बल्ल थाहा पाएँ कि हाकिम भनेको त अर्काको स्वभिमानी टाउको फोरेर मुटु नै गिजोल्न पुग्ने गिद्धे आँखा भएको फोहोरी पंक्षी पनि पो हुँदोरहेछ ।
उसलाई के थाहा पुतलीको अत्यन्तै चलायमान र पोलराईज्ड किरणहरुलाई देख्न र बुझ्न सक्ने आँखाको अनौठो क्षमता ।
पीआरका गिद्धे आँखा, म पुतली ! मैले चित्त बुभाएँ ।
अबचाहिँ जति नै चित्त बुझाउँन खोजे पनि मेरा सहकर्मी तथा आदरणीयहरुको खोक्रो शैक्षिक योग्यता, बौद्धिकता, समझदारी र सामाजिक प्रतिष्ठालाई म साँच्चै घृणा गर्ने भैसकेकी थिएँ । पीआर, केसी, सुवणर्ा र रविराजको ब्यवहार र सोच देख्दा मलाई यस्तो लाग्यो कि म बाँचेको समाज महिलालाई सोच्ने क्षमता सम्पन्न एक मानवभन्दा अनेकौं समस्याबाट शिकार भएको पीडित नमुनाको रुपमा हेर्न उद्यत छ ।
मैले निराश हुँदै पुनः पुतली सम्झिएँ ।
“के मैले पुतलीको वातावरणीय प्रतिकुलतालाई अत्यधिक ग्रहण गर्ने क्षमता र जीवनलाई निरन्तरता दिनका लागि अनेकौं परिवर्तनबाट गुजि्रनुपर्ने बाध्यतालाई बिर्सन हुन्छ ? हावामा निर्धक्क उड्ने तिनको क्षमतालाई सामान्य मान्न मिल्छ ? एक खोस्टोभित्रको अन्धकारमा कैदी भएर पनि आफूलाई सुन्दर बनाई बाहिर निस्कने पुतलीलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्छ ? झुसिल्किराका सयौं खुट्टाहरुले पनि पुतलीलाई उड्नबाट रोक्न नसकेको यथार्थ नजानेझैं गर्न सुहाउँछ ? सयौं खुट्टाको शक्तिलाई पराजित गरेर पखेटा लिई उड्न सफल हुनुभन्दा सुखद र सर्वोकृष्ट प्राप्ति अरु के कल्पन सकिन्छ ?”
वरिपरि पुतलीको संसार नबुझ्नेहरुको बर्चस्व भएका बखत मेरा यी तमाम प्रश्नहरु ब्यर्थका थिए । तापनि यतिबेला मैले आफूलाई पुतली बाहेक अरु केही कल्पनै गर्न सकिरहेकी थिइनँ । तसर्थ : रविराजदेखि पीआरसम्मले चोइट्याउँन शुरु गरेको मेरो आत्मबल र आत्मसम्मानलाई धैर्य भएर बेस्सरी कसेँ, सुम्सुम्याएँ र मनमा भएका पीडाका रहल-पहल धर्साहरुमा आफ्नै स्नेहको मल्हम लगाएँ ।
दह्रो प्रयास पश्चात मैले आफूलाई बिहान घरबाट निस्कँदाको जत्तिकै बलियो बनाएँ र म पुतलीजस्तै हलुङ्गो भएर कार्यकक्षबाट बाहिरिएँ ।
मलाई बाहिर सडक किनारामा निस्किएको मिनेट नहुँदै कसैले गाडीको हर्न बजायो । सडकको छेवैमा रोकेको गाडीबाट हर्न बजेको सुनेर मुन्टो फर्काएँ । गाडीभित्र त मेरा पुराना छिमेकी श्रीधर पो रहेछन् ।
“आउँनुस् ! म छोडिदिन्छु घरसम्म ।” गाडीको झ्यालको सिसा तान्दै वरपर हिँडेका मान्छेहरुले सुन्ने गरी बोले श्रीधरजी ।
“तपाईंले दुःख गर्न पर्दैन । म आफ्नै हिसाबले जान्छु ।” मैले भनेँ ।
“के हो ? दिउँसै घरमा बोलाएर दुनियाँसँग गोप्य भेट्न हुने अनि हाम्ले चाहिँ घर छोडिदिने भन्दा पनि नाई भन्दिने ?”
श्रीधरले सडक किनारा पनि भनेनन् । उनले मलाई गाडी रोकेर अनेकथोक भनिरहँदा उनकी ५० कट्न लागेकी श्रीमती पनि बिर्सिए । बिवाहित छोराबुहारी र नातिनातिना पनि बिर्सिए । आफ्नाो सामाजिक दायित्व बिर्सिए । नैतिकता बिर्सिए र पुरानो छिमेकी हुनुको नाता पनि बिर्सिए ।
उनले सबथोक बिर्सिरहँदा मैले पुतलीको जीवनको कायापलट सम्झिरहेँ र श्रीधरको गाडीलाई छोडेर अनेकथोक छिचोल्दै म सुरक्षित घर पुगेँ ।
दुबै छोराछोरी मभन्दा पहिल्यै कलेजबाट फर्किका रहेछन् । उनीहरुलाई देखेपछि मन शान्त भयो । लुगा पनि नफेरी म उनीहरु बसेको सोफातिर हान्निएँ । छोराछोरी दुवैलाई बेस्सरी अँगाले । त्यसपछि दुवैलाई राखेर सेल्फी पनि लिएँ ।
त्यो सेल्फीमा मैले दुईतिर बसेका मेरा छोराछोरीमा आफ्नो जीवन अगाडि बढाउने शक्तिको गहिरो मुहान देखेँ ।
मलाई छोराछोरी अँगालेको त्यो सेल्फी फेसबुकमा पोस्ट गर्ने विचार आयो । सोसियल मिडिया नचलाएको दुई महिना भैसकेको थियो । पुराना पोस्टहरुलाई धेरै छाँटकाँट गर्नु परेकाले एकाउन्ट निस्किय बनाएकी थिएँ । मैले ल्यापटप अन गरे अनि फेसबुकमा लग ईन पनि गरेँ । ५० प्लस नोटिफिकेसन देखिए । मेसेन्जरमा पन्ध्र प्लस मेसेज देखिए ।
फोटो पोस्ट गर्नुभन्दा पहिले मेसेन्जर बक्स खोलेँ । मेसेन्जर रिक्वेस्टमा दुईटा मेसेज रहेछन् । तिनैलाई पहिले खोलेँ ।
“आज अफिसमा तिमीसँग भेटेर खुशी लाग्यो । भोलि बेलुकीको डिनर मसँग है ! त्यही अनुसार तयार भएर आऊ ।” यति लेखेर पीआरले लभको ईमोजी छेउमै टाँसेछ ।
यो देखेर मलाई केही अनौठो लागेन । किनकि उसले आफ्नो चरित्र दिउँसै देखाइसकेको थियो । मैले पीआरको मेसेज तुरुन्तै डिलिट गरेँ ।
त्यसपछि रविराजको मेसेज देखियो, पुरानो साथीको मेसेज पनि देखियो । भर्खर चिनेका भर्चुअल साथीहरुको पनि मेसेज थियो । मानेका आदरणीयको पनि मेसेज थियो ।
मलाई ती सबै मेसेजहरु सुरुङ्गभित्र लुकाएका बम जत्तिकै लागे । मलाई बम बिस्फोटमा परेर अन्त्य हुनु थिएन । मैले त पुतली हुनु थियो । त्यसकारण कुनै मेसेजलाई खोल्दै नखोली सबैलाई डिलिट गरिदिएँ । तर, मलाई सबै दोहोरो चरित्र बोकेका पात्रहरु सम्झेर रातभर निन्द्रा परेन । धेरै प्रयत्न गर्दा पनि मेरो मानसपटलमा आफू सुरक्षित रहन सक्ने कुनै आधारहरु खेल्न सकेनन् ।
मैले भोलिपल्टै छँदाखाँदाको जागिरलाई राजीनामा पठाएँ । त्यसको एक बर्ष आठ महिनापछि म उडेँ – पुतली भएर । मसँगै मेरा छोराछोरी पनि उडे ।
आज साढे पाँच बर्ष कटिसके छ म स्वीडेन बस्न थालेको । मेरो जीवनमा पुतलीको प्युपा बनेर आएको त्यो स्वीडिस प्रोजेक्टले मलाई पुतली बनेर उड्ने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक सबै बल दियो । अहिले छोराले अष्ट्रेलियाबाट आईटी ईन्जिनियरिङ्ग सकेर जर्मनीको साइमन कम्पनीमा काम गर्न थालेको छ । छोरी ईन्टर्नशिप गर्न क्यानडा पुगेकी छ ।
मेरा अनेकौं पुरुष सहकर्मी छन् । ती सबैलाई म सम्बन्धबिच्छेद गरेर बाँकी जीवन आफ्नै हिसाबमा बाँच्न चाहने महिला भनेर बुझेका छन् । उनीहरुले मलाई त्यहीरुपमा आदर र सम्मान गर्छन् । म कहीँ असुरक्षित महशुस गर्दिनँ । मेरो आत्मबलमा कत्ति पनि कमी पाउँदिनँ । पाँच वर्षको लामो अवधिमा उनीहरु कसैले मेरो आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउने एक शब्द भनेका छैनन् ।
भोलि कसैसँग जीवन जोड्न चाहेँ भने म स्वतन्त्र छु । त्यो मेरो नितान्त व्यक्तिगत निर्णय हुनेछ ।
जीवनको प्रतिकुलताले मान्छेलाई जे सिकाउँछ, त्यो संसारको कुनै विश्वविद्यालयले सिकाउँन सक्दैन । मलाई जीवनले आफ्नै हकमा बाँच्न सिकायो । जीवनले नै मलाई अर्काको माटोमा साँच्चै पुतली भएर उड्ने स्वतन्त्र आकाश दिलायो । मन लाग्दा खुट्टा बिसाउने धर्ती दिलायो ।
हो ! म अहिले साँच्चै सुन्दर पुतली भएकी छु ।
(लण्डन, बेलायत) अनलाइन खबरबाट ।